Sirdoonka Soomaaliya oo ka hadlay duqeyn lala beegsaday sarkaal Alshabaab ah – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
4th February 2015 A warsame Af Soomaali, Featured 0
War saxaafadeed ka soo baxay Hey’adda Sirdoonka iyo Nabadsugida Qaranka ayaa lagu sheegay in Sarkaal sare oo ka tirsan Al-Shabaab lagu dilay weerar xaga cirka ah oo dhacay 31-dii Janaayo, kaasoo ka dambeeyay wada shaqeyn dhex martay Sirdoonka Soomaaliya iyo Saaxibo caalami ah.
“Horjoogahan lagu magacaabo Cabdi Nuur Mahdi, wuxuu isticmaalaa magacyo badan, waxay kooxda Shabaab u taqaanay Yuusuf Dheeg, wuxuu qaabilsanaa isku dubaridka iyo qorsheynta weerarada gaadmada ee gudaha Soomaaliya iyo dalalka dibada lagu qaado, isagoo sidoo kale ah maskaxda ay ku duulaan kooxda”ayaa lagu yiri war saxaafadeed ka soo baxay Sirdoonka Soomaaliya ee NISA.
“Wuxuu diyaarin jiray Qaraxyada isugu jira is qarxinta isla markaana waxaa sidoo kale la aaminsan yahay inuu ahaa udub dhexaadka Horjoogayaasha fara ku tiriska ah ee kooxdaas sii burbureysa ee Al-Shabaab ka haray”ayaa lagu yiri War saxaafadeedka.
Baarlamanka oo ka dooday xayiraadda kusoo socota xawaalada Soomaalida ee Mareykanka